ko htike's prosaic collection: ထောင်မှ လွတ်လာသော ကိစ္စများနှင့် ပက်သက်သမျှ
Posted by ကိုထိုက် at 12:26
ကိုထိုက်ရေ...........ဦးဝင်းတင်ပြန်လွှတ်တာကို ကြားသိရတာ အင်မတန်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အန်တီစုနှင့်တကွသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တကွသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ အမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
23 September 2008 at 15:07
အနည်းလွှတ်လိုက်တာထက်၊ အများက ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထောင်သမားလွှတ်တာက များ။ ဒီလူတွေက မြန်မာ့ရှေ့ရေးကို ကူညီပေးနိုမယ်ဆိုပဲ ။။ ၂၀၁၀ မှာ ဆန့်ကျင်သူတွေကို ဝိုင်းရိုက်ဖို့ သူခိုးဂျပိုးတွေကို ထောင်က ထုတ်တာ.. ကောင်းတဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မပါဘူး ပြောရင်၊ အားလုံးက ဝိုင်းထောင်းမှာစိုးလို့ .. ဦးဝင်တင်တို့ကို လွှတ်တာ.. မြန်မာပြည် ရှေ့ရေးအတွက်တော့ ပိုတောင် ဝန်လေးမိပါတယ်။
23 September 2008 at 15:43
today I,m happy
can y upload VDO from DVB english http://english.dvb.no/news.php?id=1782
thx < Latest video of U Win Tin at his house after his release today, meeting with family members, friends, well-wishers and supporters<
they have rearrested U Win Htein withinaday. Whatajoke.
26 September 2008 at 04:34
28 February 2009 at 08:32
25 March 2009 at 08:41
台灣a片台灣a片台灣a片台灣a片台灣a片台灣a片台灣a片台灣a片台灣a片 免費線上看a片 免費線上看a片 免費線上看a片 免費線上看a片 免費線上看a片 免費線上看a片 免費線上看a片 免費線上看a片 免費線上看a片線上a片免費看線上a片免費看線上a片免費看線上a片免費看線上a片免費看線上a片免費看線上a片免費看線上a片免費看線上a片免費看線上a片免費看歐美 a片歐美 a片歐美 a片歐美 a片歐美 a片歐美 a片歐美 a片歐美 a片歐美 a片歐美 a片 美國a片 美國a片 美國a片 美國a片 美國a片 美國a片 美國a片 美國a片 美國a片 美國a片美女a片美女a片美女a片美女a片美女a片美女a片美女a片美女a片美女a片美女a片情色a片情色a片情色a片情色a片情色a片情色a片情色a片情色a片情色a片情色a片限制級試看a片限制級試看a片限制級試看a片限制級試看a片限制級試看a片限制級試看a片限制級試看a片限制級試看a片限制級試看a片限制級試看a片 分享自拍a片 分享自拍a片 分享自拍a片 分享自拍a片 分享自拍a片 分享自拍a片 分享自拍a片 分享自拍a片 分享自拍a片 分享自拍a片 免費aaa片俱樂部 免費aaa片俱樂部 免費aaa片俱樂部 免費aaa片俱樂部 免費aaa片俱樂部 免費aaa片俱樂部 免費aaa片俱樂部 免費aaa片俱樂部 免費aaa片俱樂部 免費aaa片俱樂部 免費線上觀看a片 免費線上觀看a片 免費線上觀看a片 免費線上觀看a片 免費線上觀看a片 免費線上觀看a片 免費線上觀看a片 免費線上觀看a片 免費線上觀看a片 免費線上觀看a片免費A片視訊情人高雄網小魔女自拍天堂視訊美女正妹牆a片分享a片分享a片分享a片分享a片分享a片分享a片分享a片分享a片分享a片分享 a片區 a片區 a片區 a片區 a片區 a片區 a片區 a片區 a片區 a片區日本線上免費a片日本線上免費a片日本線上免費a片日本線上免費a片日本線上免費a片日本線上免費a片日本線上免費a片日本線上免費a片日本線上免費a片日本線上免費a片情色視訊
13 April 2009 at 13:37
26 August 2009 at 19:37
17 March 2010 at 06:29